Ithelevishini ye-elekthronikhi isekelwe ekuphuhliseni ityhubhu ye-cathode ray.
Ukuphuhliswa kweenkqubo zikamabonwakude kwisekelwe ekuphuhlisweni kwe-tube cathode ray (CRT). I-tube cathode ray tube aka picture itholakale kuyo yonk
I-cathode yi-terminal okanye i-electrode apho iifowuni zifaka inkqubo, njenge-cell electrolytic okanye ityhubhu ye-electron.
I-cathode ray iyintlambo yee-electron ezishiya i-electrode engafanelekanga, okanye i-cathode, kwiphubhu yokutshatyalaliswa (ityhubhu ye-electron equlethe i-gas okanye i-vapor kwi-low pressure), okanye ikhutshwe ngumbonakalo olushushu kwii-electron tubes.
I-tube yocwecwe yiphubhu ye-electron elineglasi efihliweyo okanye i-enclosure yensimbi apho ihoxisiwe khona emoyeni.
I-tube ye-cathode ray okanye i-CRT yiphubhu ekhethiweyo yecala apho imifanekiso ikhiqizwa xa ibhambeka ye-electron ibetha indawo ye-phosphorescent.
Ngaphandle kweesethiyamabonwakude, i-cathode ray tubes isetyenziswe kwii-computer, i-machine-teller machines, imishini yemidlalo yevidiyo, ii-camera cameras, i-oscilloscopes kunye ne-radar.
Isixhobo sokuqala sokuskena i-cathode ray sakhiwe yintsimi yaseJamani uKarl Ferdinand Braun ngo-1897. UBraun wazisa i-CRT ngekrini yesikhombisi, esaziwa njenge-cathode ray oscilloscope. Iskrini siyakubonisa ukukhanya okubonakalayo xa ibethwa ngumgqomo wama-electron.
Ngowe-1907, ososayensi waseRashiya uBoris Rosing (owayesebenza kunye noVladimir Zworykin ) wasebenzisa i-CRT kwi-receiver yeprogram ye-TV ekupheleni kwekhamera esebenzisa ukukhangela kwidrafra-drum. I-Rosing idluliselwe iipateni zeejometri ezingenakucala kwi-screen yesikrini kunye nombonisi wokuqala ukwenza oko usebenzisa i-CRT.
Izikrini ze-phosphor zanamhlanje zisebenzisa izixhobo ezininzi zee-elektrononi ziye zavumela ii-CRTs ukuba zibonise izigidi zembala.
I-tube ye-cathode ray iyishubhu ephumayo eyenza imifanekiso xa i-phosphorescent yayo ishaywa ngamagquma e-electron.
IsiJalimane, uHeinrich Geissler ucela i-tube yeGeissler, eyadalwa ngokusebenzisa ipompu ye-mercury yileyimboli yokuqala yokufudumala (yomoya) i-tube vacuum kamva yaguqulwa nguSir William Crookes.
IsiJalimane semathematika kunye ne-physicist, uvavanyo lukaJulius Plucker kunye nemirhumo engabonakaliyo. Imibala yeCathode yabonwa kuqala nguJulius Plucker.
AmaNgesi, uMongameli uWilliam Crookes wayengumntu wokuqala ukuqinisekisa ubungqina beemitha ze-cathode ngokuzibonakalisa, ngokuveliswa kwayo kweTrookes tube, umfanekiso ongenamacandelo kuwo onke ama-tubatho.
IsiJalimane, uKarl Ferdinand Braun ucela i-CRT oscilloscope - i-Braun Tube yayiyi-foreunner yee-tubs ze-TV kunye ne-radar.
UVladimir Kosma Zworykin wasungula ityhubhu ye-cathode ray ebizwa ngokuba yi-kinescope-ukuze isebenziswe ngumbonwakude we-TV.
U-Allen B. Du Mont wenza i-CRT yokuqala yokuthengisa kunye nehlalayo ngokubhekiselele kumabonakude.
Iindlela ezi-5 zokusebenzisa ukuphumla nokucamngca ukwenza i-Learning Stick
Iprogram yePhepha yokuThengisa iWebhu kwi-Window
Amaqiniso NgamaNarwhals, ii-Unicorns zoLwandle
Ikholeji ye-Holy Cross Profile Admissions